new Archive - Professional Ukuveliswa Metal Ukugcinwa Izixhobo Metal Isikhongozelo,Itroli,Pallet,Rack,Isikhongozelo Roll njl
Ekhaya » new
Kutheni iinkampani zisebenzisa iibhasikiti zentsimbi?
Njengenkqubo ebalulekileyo kwinkqubo yokuhambisa izinto, izinto zebhaskithi yentsimbi ikwayinxalenye ebalulekileyo yokuhanjiswa kwemveliso. Iibhasikithi zentsimbi zihlala zidlala indima yokuphucula ukusebenza ngokuhambisa, ukunciphisa uluhlu lweemveliso, kunye nokuqinisekisa imveliso enocwangco. Ukuthi ngqo, ukuba kukho iintlobo ezininzi kunye nobuninzi beemfuno ezibonakalayo kumasifundisane wokuvelisa, the low efficiency…
Ulwahlulo lweepelethi ngokuthe ngcembe lusemgangathweni
Iikhrayitheriya zokuhlela Ngokwemathiriyeli, sebenzisa, itafile ephezulu, indlela yeforklifting kunye nolwakhiwo lwe forklift, Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeepelethi. Ingakumbi ngamanye amaxesha afuna ukusebenza ngokukhawuleza, ngenxa yokusebenza okuphezulu, ukhuseleko kunye nozinzo lweepelethi, amazwe ahlukeneyo avelise iintlobo zeepelethi ezizodwa. Ezifana neepelethi zeglasi ethe tyaba, iitreyi zetayara, long-size pallets and…
Iindidi ezintandathu zokugcina, iitreyi ezinkulu
(1) Itreyi ethe tyaba. Iipelethi ezithe tyaba ziphantse zafana neepelethi. Ngethuba nje iipelethi zibizwa ngokubanzi njengeepallet, iipelethi ezicaba zezona zisetyenziswa kakhulu, kwelona nani likhulu lokusetyenziswa kunye nokuhambelana okungcono. Iitreyi ezithe tyaba zingahlulwa-hlulwa zibe ziindidi ezintathu. 1 Ngokokuhlelwa kwetafile ephezulu. Zine iindidi: icala elinye, icala elinye,…
Abavelisi bePallet abenziweyo
Isixeko saseFoshan, izixhobo zokugcina eziqinileyo, yobunjineli obuneplastiki ibhokisi yokhuseleko lweplastiki eyomeleleyo: izinto eziphambili ngokweemfuno zabenzi ezahlukeneyo zetekhnoloji yemveliso kunye neemfuno zomgangatho zahlukile, ikakhulu ekubunjweni komxholo wentlabathi kunye nomyinge wokugcwalisa wahlukile, umgangatho wemveliso Kukho umahluko omkhulu. The so-called contrast between the…
Amanyathelo okhuseleko ahambelana nokudityaniswa kwesitora
Amanyathelo okhuseleko ahambelana nokudityaniswa kwesitora: 1. Izinto zokwenza imveliso kufuneka ziphawulwe ngemeko yokuhlolwa, inombolo yezinto, Umhla wemveliso, kwaye akufuneki idlule kugcino olusebenzayo lwezixhobo. Ixesha; izinto ngaphandle komhla, wonyuse kwakhona unyaka, inyanga, kunye nosuku kwisincamathelisi; 2, iimeko zokugcina kufuneka zigcinwe ngaphantsi kwe-28C, ukufuma 40 ~ 80%; air conditioning audit factory to open on the…
2021 ikhathalogu yokugcina izixhobo zeIgu